ကြေတာဝန်ခံ:Pinay ညမ်းဂိမ်း&Lbfm လိင်ဆပ်ကပ်
ဟေး၊မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကြေတာဝန်ခံ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအလုပ်လုပ်ပြီလို့နာရီပတ်ပတ်လည်များအတွက်ပြီးခဲ့သည့် ၃ နှစ်ပြတိုက်တစ်ခု၏အကောင်းဆုံးအဖိလစ်ပိုင်ပုံစံညမ်းဂိမ်းများကိုအင်တာနက်ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပြီးလူနေမှုအဘို့အနိုင်ငံအတွင်း ၆ လအပေါ်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆင်ပြေပျက်မိတယ်၊အချစ်နှင့်အတူအလံနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးရှိပါတယ်။ ကြောင်း၏ရလဒ်အဖြစ်အတွေ့အကြုံ၊ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့သောအခါငါအိမ်ပြန်ရောက်တော့၊ငါဖန်တီးညမ်းဂိမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှမြှုပ်နှံသောနိုင်ငံ! ကျွန်တော်ဆိုလည်းအပူ LBFM အခါ၊ငါတို့သည်သူတို့အထဲသို့တစ်ဂိမ်း၊ကသိသာကြီးပဲဘယ်လိုရိုင်းသောအရာသွားခဲ့ကြရသည်။, ငါတောငျ့များအတွက်လတ်ဆတ်တဲ့အရသာအတွက်အနည်းငယ်အညိုရောင်အစုတ်စက်အဖြစ်အပျက်နှင့်ယခုကျွန်တော်နှင့်အတူလက်နက်ပါတဲ့အပြာဂိမ်းပတ်ပတ်လည်အခြေတည်အတိအကျကြောင်း၊ဘုန်းပြောဖို့အလွန်အနည်းဆုံး! စွဲ၏တောင်ဘက်အရှေ့အာရှလိုတေးသွားကိုအတွက်ချက်ချင်းမရလျှင်တစ်နေ့:ဒီလိင်ဂိမ္းရှာပုံတော်သွားအလုပ်ဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိ၏တစ်ဦးချင်းစီကိုအမှန်ပင်။ တက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ထုတ်ကြိုးစားတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့–ခင်ဗျားမရှက်ကြောက်တာနဲ့ဘယ်လောက်ကြည့်ယုံကြေတာဝန်ခံသည်အဲအာမခံယူအဆိုပါဘဏ်သည်ရန်!
ဆိုရင်အပြေးအပေါ်အဟောင်းစက်ဒါပေမယ့်သင်ဆဲကစားချင်ခေတ်ဂိမ်းများ၊တစ်ခါတစ်ရံလာအဖြစ်အနည်းငယ်လှုပ်ခါသူတို့မယုံနိုင်လောက်အောင်အနှေး၊ရွားလှကြည့်ရှုသို့မဟုတ်အချို့ရှားပါးသာဓကအတွက်၊ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်မှာအားလုံး! ကြီးစွာသောအရာကကြေတာဝန်ခံကြောင်းသိရသည်တက်မြေပြင်ကနေတည်ဆောက်ထားနှင့်အတူထုတ်ဖော်ပြောဆိုရည်ရွယ်ချက်သည်သေချာအောင်လူတိုင်းလက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖစ္ၿပီးအထူးစနစ်ခွင့်ပြုရန်ရှာဖွေပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်တစ်ဦးတံစဉ်များကိုလုပ်ပါသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားဖို့မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးအတွက်လျော့နည်းအရေးအခြားသူများထက်။, ဥပမာအားဖြင့်၊စစ်မှန်သော-အချိန်အတွက်လျှော့ချရေးနားရေတွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအင်္ဂါအဘို့အခွင့်ပြုထားသောအနည်းငယ်အတွက်လျော့ချရေးအမြင်အာရုံအရည်အသွေးအသေချာစေရန်မရှိနှင့်ကိုက် framerates။ ဤအပြင်၌၊ကြေတာဝန်ခံလည်းသင်ကစားရန်ခွင့်ပြုဂိမ်းအပေါ်သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်တစ်ဦးဗားရှင်းသီးသန့်ဒီဇိုင်းအဘို့အသေးငယ်တဲ့ဖန်သား။ ဒါဟာအလုပ်တွေအများကြီးသွင်းထားဒီတူတူ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှိသည်ဖို့အလိုရှိဤၡမ်ား Pinay ငယ်ရှာဖွေနေအဖြစ်အရသာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ကတစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းကျနော်တို့သွားနိုင်။, လိမ်လက်ရုံးကိုငါ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကရဒီစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုခဲ့သည်၊ဒါပေမယ့်အခုတော့ကျနော်တို့အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်နှစ်ခုလုံးကွန်ပျူတာနဲ့မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများကို၊ကျနော်တို့ခံစားရတယ်ဖူးပိုပြီးယုံကြည်မှုဂိမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့လူတိုင်း!
ကတည်းကသင်လိုအပ်သမျှလက်လှမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါသည်၊ဤကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်အဆိုပါထူးခြားသောစွမ်းရည်ကိုမှ frontload အားလုံးကိုဝေ့ဒေသခံသင်ဖို့အသုံးပြုနေတာပါတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများ။ ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆိုလိုတာကဒီအအတိအကျ? သင့်ရဲ့ကယ်တင်ကြအလျှောက်ခြင်းနှင့်မသာကြောင်း၊သူတို့ကတစ်ချိန်တည်း။ အခါသင်ဒီဂိမ်းကိုကစားရန်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းကိုသင်၏အာဏာအသေခံခြင်းနှင့်သင်ဆုံးရှုံးသွားတိုးတက်မှုများ၊သို့မဟုတ်အခြားဆင်းရဲကျယ်ပြန့်သောကွောငျ့သငျသညျမကယ်ဖို့ဆိုတာသတိရပါပြီးနောက်'ပြီး'တစ်ခုနှင့်အတူအစည်းအဝေး။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများကိုစီမံခန့်ခွဲများ၏အားလုံးသောနိုင်ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အသွားနှင့်ထွက်တဲ့ဂိမ်းမပါဘဲလက်ခံရရှိမည်သည့်အနှုတ်ရမည်။ ပိုင့်အဘယ်သို့၊သင်သည်လည်းရှိသည် ၁၀၀ိုင္ငံနစ္ခုဖို့ခွင့်ပြုနယ်ဂိမ်းမှကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများ။ ဒီအထူးသဖြင့်အရေးကြောင့်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်အလုပ်လုပ်တယ်:အာင္ရှင်းပြရန်ဘယ်လိုအကြောင်းသင်၏ရွေးချယ်မှုလုပ်ပါတစ်ဦးခြားနားသည့်အခါဂိမ်းကစား!
အပြားအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲ၊အရွေးချယ်မှုများဖြစ်စေရိုးရိုးမသွားဘူးဆုံးဖြတ်ရန်အဘယ်အရာကိုသင်ဖွင့်လုပ်နေနိုင်စွမ်းနှင့်မည်သို့သင်ဂိမ်းကိုဖြည့်:အကြောင်းအရာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှကြွလာသောအခါပ်ဥ္ေ။ ကျွန်တော်ဆွဲမှာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖန်တီးရန်အလှန်အတွေ့အကြုံနှင့်အပြေးနှင့်အတူထိုအချက်ကိုယခုအဘယ်မှာရှိလူတိုင်းထင်သွားဖို့လုံးဝချစ်ခြင်းမေတ္တာငါတို့အဘယ်မှာရှိ။ အခြေခံအကြောင်းရင်းအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်ချက်များ–ဖြစ်သောအကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့–အမည်ပြောင်းလဲနည်းအမျိုးမျိုး NPCs သင်တို့နှင့်အတူဆက်ဆံခြင်းနှင့်နောက်ထပ်အကြောင်း၊အရာမြားသင်ရှိသည်ဖို့တတ်နိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ။, အခါသင်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြို့မြို့၊သင်ရှာစေခြင်းငှါမိန်းကလေးများအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားသင့်ဝင်ငွေ၊အမိန်းကလေးများအပေါ်ချွတ်ကျွန်း၏အလယ်တွင်အဘယ်နေရာပဲဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းထက်။ ကြေတာဝန်ခံခွင့်ပြုဖို့သင်၏ဇာတ်ကောင်ကနေအလွန်အစပိုင်းနှင့်အတူအစည်းအမျိုးမျိုး၏မက်ထရစ်ကိုသင်သေချာစေရန်တဲ့င်တစ်ဦးအမှန်တကယ်မူထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအတိုင်းအချိန်သင် retry။ ဒီအကောက်အလုပ္မ်ား၊ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား၊ထောက်လှမ်းရေးအဆင့်ဆင့်နှင့်တော့။, သင်တိုးတက်လာမှာအဖြစ်၊သင်ဖို့စွမ်းရည်ကိုလည်းရှိသည်ကောက်ကွဲပြားခြားနားသောစကားရွေးချယ်မှုများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံအတွက်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများအလုပ်၏အောင်မြင်မှုနှင့်အတူမင်းသမီးအကြောင်းနည်းနည်းပိုကောင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဤရှိခြင်းအများကြီးကိုကယ်တင်ချက်များသည်ကြီး:သင်ချင်တယ်နောက်ကျောသွားကြဖို့ကြိုးစားကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုအပေါင်းတို့သည်အချိန်!
မပတ်ပတ်လည်ရှုပ်ထွေးဒီမှာ Greenhill ထုတ်လုပ်၊အရာသည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လိင် simulation ဖစ္ၿဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအခုတော့စျေးကွက်အပေါ်။ သင်သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဖွဲ့လုံးကအစရိတ္ကအကိုထိန်းချုပ်ရန်၏အပြန်အလှန်နှင့်အတူ NPCs နှင့်အောင်သူတို့ကိုအတိအကျဘယ်လိုသင်ချင်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်မူထူးခြားတဲ့၏အပိုင်းအစဂီယာနှင့်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူဘယ်လောက်ဝေးတစ်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရရှိလာစေဖို့ခေတ်အပိုင်းအစစက်နိုင်၏မာနထောင်လွှားဖြစ်။, အင်ဂျင်အပြေးတစ်ဦးကဲ့သို့ဒါရိုက်တာယိုပေးနိုင်ပါတယ်သောအရိုက်ချက်များအပေါ်အရာအားလုံးမှအလင်းရောင်နှင့်အသံဖြင့်အမြန်နှုန်း၊အရှိန်၊ကစားစရာအသုံးပြုမှု၊cumshot တည်နေရာနှင့်တော့။ ကြေတာဝန်ခံယူ၏အတွေ့အကြုံထိန်းချုပ်လိင်တူ Pinay ငယ်မှလာမယ့်အဆင့်အထိ။ င့်လျှင်သင်သည်အစဉ်အလိုကိုကျော်ပြီးပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုဘယ်လိုအ LBFM ရရှိပြီးညစ်ပတ်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ကြက်၊ဒီအဆပ်ကပ်သင်တို့အဘို့အ! ထုတ်ကြိုးစားပြီးမှာအံ့အားသင့်လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမှုအရာရနိုင်။